Yimiphi imibuzo ingane yami okufanele ikwazi ukuyiphendula (futhi imiphi okufanele ikwazi ukuyibuza)? - Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » ulimi » Yimiphi imibuzo ingane yami okufanele ikwazi ukuyiphendula (futhi yimiphi okufanele ikwazi ukuyibuza)?
Leli thebula likhombisa amakhono ahlobene nemiqondo ebalulekile yolimi. Vele, kunezinhlobonhlobo ezahlukahlukene ezingafani phakathi kwezingane. Kodwa-ke, umehluko omkhulu kakhulu kulezi zigaba kungaba yizizathu zokubonisana nochwepheshe.
Imibuzo okufanele akwazi ukuyiphendula
Imibuzo ethi "kuphi". Isibonelo: liphi ibhola? (ephendula ekhomba umfanekiso webhola osencwadini)
Imibuzo ne "kuyini?" ephathelene nezinto ezijwayelekile
Yebo / cha phendula imibuzo, ukunqekuzisa ikhanda noma ukunikina ikhanda
Ikhombisa izinto ezichaziwe, ngokwesibonelo zikhombisa isigqoko lapho kubuzwa ukuthi "Ubeka ini ekhanda lakho?"
Iphendula imibuzo elula ngokuthi yini, kanjani, nini, kuphi futhi ngani
Iphendula imibuzo efana nokuthi "Wenzani uma uzizwa ubanda?"
Iphendula imibuzo efana nokuthi "Kuphi ...", "Kuyini?", "Wenzani ....?", "Ubani ...?"
Uphendula noma aqonde imibuzo efana nokuthi "Uyazi ...?"
Uphendula imibuzo eyinkimbinkimbi ngokuthi "Ngubani", "Kungani", "Kuphi" nokuthi "Kanjani"
Uphendula imibuzo ngokuthi "Wenzani uma?", Okufana nokuthi "Wenzani uma lina?"
Iphendula imibuzo ephathelene nemisebenzi yezinto, efana nokuthi "Isipuni senzelwa ini?", "Kungani sinezicathulo?"
Uphendula imibuzo ngo- "Nini"
Uphendula imibuzo ngokuthi "Bangaki?" (lapho impendulo ingeqi kwesine)
Imibuzo okufanele akwazi ukuyibuza
Qala ukusebenzisa ifomu lokubuza imibuzo, uqale ngokuthi "Yini leyo?"
Sebenzisa iphimbo elikhuphukayo
Ubuza imibuzo - ngisho naleyo eyenziwe lula - ehlobene nezidingo zakhe, ngokwesibonelo "Likuphi ibhisikidi?"
Ubuza imibuzo ethi "Kuphi?", "Ini?", "Wenzani?"
Ubuza imibuzo elula nge "Kungani?"
Lapho ubuza umbuzo sebenzisa "Yini", "Kuphi", "Nini", "Kanjani" nokuthi "Ngubani"
Ubuza imibuzo nge "Ngabe ngu / a ...?"
Ubuza le mibuzo elandelayo esebenzisa isakhiwo sohlelo lolimi esilungile: "Uyafuna ..." + okungapheli, "Ungakwazi ...?"
ingane iyayiqonda imibuzo, ingane iphendula imibuzo, imibuzo yengane, ulimi, ukuthuthukiswa kolimi
Yimiphi imibuzo ingane yami okufanele ikwazi ukuyiphendula (futhi yimiphi okufanele ikwazi ukuyibuza)?2020-11-052020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/ezgif-3-fd7065ffb83c.png200px200px
Mangaki amagama ingane yakho okufanele iwazi (kuya ngeminyaka)ulimi
Qinisa imemori yokusebenza ukuze uthuthukise ulimiIzindatshana, Ulimi, Imemori Yokusebenza